နှုတ်ဆက်တာပါ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှုတ်ဆက်တာပါ….
Posted by Ma Ei on Feb 2, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
လက်… လက်.. လက်ကြီး….
ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်သံနဲ့အတူ ပြေးထွက်သွားတဲ့ ခင်မရဲ့ခြေသံကိုကြားလိုက်ရတာမို့…
ကြည့် လုပ်ပြီ ခင်မတို့များ သူများကို မစောင့်တော့ဘဲနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာတစ်ယောက်ထဲထားခဲ့တဲ့ အပြင် ခြောက်သွားသေးတယ်..သိမယ်
ဒါနဲ့ ကျမ ဆရာယူခိုင်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေယူ၊ ရုံးခန်းတံခါးကို သော့ပြန်ပိတ်နေရင်း ကျောချမ်းလာသလို တစ်ယောက်ယောက်က ကြည့်နေသလို ခံစားမိတာနဲ့ နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်..
တစ်ယောက်ယောက် တစ်ဖက်ခန်းထဲဝင်သွားတာ လက်လေးဘဲမြင်လိုက်ရတယ်. .အဲ့ဒီလက်..ချယ်ရီရောင် လက်သဲနီလေးတွေဆိုးထားတဲ့ ဖြုသွယ်လှပတဲ့ လက်ကလေး…ဟင် ဒါ..ဒါ..မမရည်မွန် ရဲ့လက်..
… … … …. ……. ….
မမရည်မွန် တဲ့ ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ချောလှသတဲ၊့ ခု နှစ်ဝက်မှ အသစ်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူတဲ့ ၊သွားကြည့်ရအောင်တဲ့ ခင်မ ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့် ကျမတို့ ခုနှစ်တန်းကျောင်းသူတစ်စု မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ရှစ်တန်းအေကို သွားချောင်းကြပါတယ်။ ကျမတို့အုပ်စု အခန်းပေါက်သကနေ အတန်းထဲကို အသည်းအသန် ချောင်းနေချိန် သူက အတန်းထဲဝင်ဘို့ ကျမတို့ အုပ်စုနောက်မှာရောက်နေခဲ့တယ်..ကျမတို့ပြောသမျှ သူအကုန်ကြားခဲ့တယ်..ညီမလေးတို့လို့ ခေါ်တဲ့ သူ့အသံလေးက ချိုသာနေခဲ့တယ်..အဲ့လိုနဲ့ဘဲ သူက ကျမတို့ အချစ်တော် မင်းသမီးလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ချယ်ရီရောင် လက်သည်းနီ ဆိုးထားတဲ့ ဖြူဖြူသွယ်သွယ် လက်ကလေးကို အချစ်ဆုံးပါလို့ ပြောရင် သူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ရယ်တတ်တယ်..သူကလဲ အနေအေးတဲ့ ကျမကို အချစ်ဆုံးတဲ့ ..ချစ်စရာ မမရည်မွန်ပါ..
ကျမတို့်တင်မက ကျောင်းသားတွေကလဲ သူ့ကိုချစ်လာကြတဲ့အခါ..အဲ့ဒီသူတွေကတော့ ကျမတို့ရဲ့ရန်သူပေါ့ သူ့သဘောကျ သူ့ကိုကာကွယ်ဘို့ ကိုယ်ရံတော် တာဝန်ယူခဲ့ကြတယ်…သူ့ကိုချစ်တယ်ပြောသူမှန်သမျှ ကျမတို့ရဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရန်ပြုခြင်းကို မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်…ကျမတို့ အုပ်စု ဘယ်လိုပညာပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြောပြရင်း သူနဲ့အတူ ပျော်နေခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာဘဲ သူ ကျမတို့ကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြလာတယ်..အဲ့ဒါ သူ့ချစ်သူတဲ့ ဒီကျောင်းကဘဲတဲ့ သူ့ကို မနှောက်ယှက်ရဘူးတဲ့ ညီမလေးတို့ လက်ခံရမတဲ့ ကျမတို့ တားကြတယ်…သူလက်မခံဘူး…ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမယ်ထင်သလဲ… ထုံးစံအတိုင်းပေါ့…ဒီတော့သူ စိတ်ဆိုးတယ်၊ ကျမတို့ကို မခေါ်တော့ဘူး။ ခင်မတို့က သူ့ကို စိတ်ဆိုးလို့ အခေါ်ပြောမလုပ်တော့ဘူး နင်သွားရင် နင့်ကိုလဲ မခေါ်ဘူးတဲ့ ကျမ သူ့ဆီဘဲသွားခဲ့တယ်။ ကျမကို အချစ်ဆုံးဆိုတော့ ပြောရင် ရနိုင်မယ်ထင်ခဲ့တာကိုး ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆို နောက်မလာနဲ့တော့တဲ့…ဒီလိုနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယ်…
အဲ့ဒီနောက် သူ့ ..အဖေနဲ့ အမေ ကွဲသွားတယ်တဲ့ ၊ အဖေနဲ့ နေတယ်တဲ့၊ ခဏခဏ ကျောင်းပျက်သတဲ့..ရည်းစားနဲ့ ကျောင်းပြေးတာတဲ့၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးက မိဘခေါ်တွေ့တော့ သူ့အဖေသိသွားပြီး အရိုက်ခံရသတဲ့… ကျောင်းထုတ်သွားပြီတဲ့ ..ခိုးထွက်တာ လမ်းထိပ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကို သူ့အဖေမိလို့ နှစ်ယောက်လုံး အရိုက်ခံရသတဲ့ .. အိမ်ပြင်ပေးမထွက်ဘူးတဲ့…အိပ်ဆေးတွေသောက်လို့ သေသွားပြီတဲ့…အိပ်နေသလိုဘဲတဲ့…သူ့အကြိုက် ချယ်ရီရောင် လက်သည်းနီ ဆိုးထားပေးတယ်တဲ့…အသုဘ ချတဲ့နေ့က ကျောင်းသားတွေ အခေါင်းကစားသတဲ့ …ပန်းခွေနဲ့ ဇာတွေယူလာပြီး ကျောင်းက စက္ကူပင်မှာချည်ထားသတဲ့…အတန်းထဲမှာ သူ့ထိုင်ခုံကို ဘယ်သူမှထိုင်လို့မရဘူးတဲ့.. တွန်းချတယ်တဲ့… စာအုပ်တွေလွှင့်ပစ်တယ်တဲ့… နှင်းဆီပန်းနံ့တွေပေးတယ်တဲ့..ပရိတ်တရားနာလဲ မရဘူးတဲ့.. စာမေးပွဲနေ့ သူ့အတွက် ထိုင်ခုံပေးထားရတယ်တဲ့…
…. … …… … … …. ….
ကျမ အော်ငိုနေချိန်မှာဘဲ ငိုနေတဲ့ ခင်မနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာတို့နဲ့ အတူရောက်လာပြီး ကျမကို သင်တန်းခန်းမဆီကို ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်..
ဆရာက ရယ်လျှက် အမယ်လေး တစ်ကယ့်ကြက်ခြေနီတွေပါလား…နွေကျောင်းပိတ်ရက် သင်တန်းပေးရုံမကသူတို့ကိုပါပြန်ပြုစုရတော့မတဲ့… သရဲ ခြောက်ခံရတာများ အော်ငိုနေရသလားတဲ့ သူများတွေ ၀ိုင်းရယ်ကြပေမယ့် မရယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..မမရည်မွန်ရေ…မမရည်မွန်က ကျမကို ခြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်… နှုတ်ဆက်တာပါ… နှုတ်ဆက်တာပါ…
ပြုပြုသမျှ ကောင်းမှု အစုစုကို အမျှပေးဝေပါတယ်
ဘ၀ အဆက်ဆက် ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံပါစေနဲ့
ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ မမရည်မွန်ရေ…
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခွဲရမှာဘဲ ဒီ သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာ အမှန်တော့ အမှန်ပါဘဲ။
အမှန်တော့ အမှန်ပေါ့ ကိုခရယ်..
Feb 17, 2012 – And so LeDoux and Nader madeabet: If Nader failed to permanently eraseaset of fear memories in four lab animals, he had to buy LeDouxa…
ချယ်ရီရောင် လက်သည်းနီကလေးနဲ့ လက်လှလှလေးကိုတွေ့ရင်
နှစ် ၅၀ စုထားတဲ့ မီမိုရီတွေထဲမယ် မလိုချင်တဲ့ မီမိုရီတွေလဲ ရှိသလို
တစ်ချို့မီမိုရီတွေကို သိမ်းထားချင်တာမို့ ခုပြောတဲ့(မလိုချင်တဲ့မီမိုရီကိုဖျောက်ပစ်တဲ့ဆေး)
ကိုတော့ မသောက်ချင်သေးပါဘူး သဂျီးရယ်…
အဲဒီဆေးအကြောင်းရေးတဲ့..ဆောင်းပါးထဲမတော့.. ကားမတော်တဆဖြစ်လို့သေတဲ့..မိသားစုဝင်တွေရဲ့..မျက်နှာတွေ.. နာကျင်မှုတွေကို..မသေပဲကျန်ရစ်သူက ဖျောက်ချင်တာကနေ..စခဲ့တာလို့ဆိုတယ်…။
ချစ်ရွှင် သနား တည်ငြား ကြမ်းကြုတ် စက်ဆုပ် ကြောက်ရွံ့ ရဲဝံ့ အံ့သြ နောအရသာ…
စိတ်ခံစားမှုဆိုတာ… နည်းမှန်လမ်းမှန်ခံစားတတ်ရင်.. တွန်းအားလည်းဖြစ်.. အရသာလည်းရှိ…။
သနားးးပါတယ် မရည်မွန် ရယ်..!!
ခုတလော သေလွန်ပြီးးးနောက် ကိစ္စတွေ ပိုတွေးးးမိနေတယ်…!!
မွအိ ရေးးးတာလည်းး ကောင်းးတယ်
လူတကိုယ် ကံတမျိုး ထူးဆန်းတယ်။
တချို့တချို့သော လူတွေက ကံကောင်းလွန်း/ဆိုးလွန်းတွေကို ကြုံရတတ်ကြတယ်။
တချို့ချို့သော လူတွေ ကျတော့လည်း မွေးသည်မှ သေသည်ထိ ဘာမှသိပ်အပြောင်းအလဲ မရှိကြဘူး။
.ငယ်က တစ်ကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်လေးပါ…
.စာလေးရေးချင်တာနဲ့ ချရေးကြည့်ပြီး ရွာထဲတင်မိတာ…
.ကလေးအတွေး ဖြစ်နေပြီနဲ့ တူရဲ့..
ကျောက်စ်ကိုယ်တွေ့မို့ သေခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲတွေကို ယုံပါ၏…
မအိကို သံယောဇဉ်ရှိလို့ လက်လေးပြပြီး နှုတ်ဆက်တယ်ဖြစ်မှာ…
ပြောရရင်… ကလောသွားတဲ့ မီးရထားလမ်းပေါ်က ပျဉ်ညောင်ဆိုတဲ့ဘူတာမှာ…
ကျောက်စ်တို့ မောင်ဘူမိတွေ အခုအထိ ကွင်းဆင်းစခန်းထိုင်လို့မရ…
အဲ့စခန်းမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းက ကွိုင်ရှာလွန်းလို့…
သူနှုတ်ဆက်တာက နေ့တိုင်းလိုလို … အဟိ
.ဒီလိုတွေကို ယုံသူလဲရှိ..မယုံသူလဲရှိပေါ့ နော်…
လုလုကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကို မခံယူချင်ဘူး
ခွဲခွာခြင်းရဲ့ ဒဏ် ကိုမခံနိုင်လို့ ပါ
ဟိုက် !!!! ပလောက်တောက်… အဲလေ..ပလုပ်တုပ်…
.ကိုယ်က အရင် သွားချင်တယ်ပြောမိလို့
စိတ်မကောင်းစရာဇာတ်လမ်းပါလား မအိရယ်။ မမေ့ထိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ
.အချစ်ကို ရှေ့တန်းတင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှား လို့
. ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းလှလှလေး တစ်ပွင့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်..
မကျွတ်မလွတ် တဲ့ သူ တွေ အကြောင်း ကြားတိုင်း ကြုံ လဲ ကြုံ ကြည့်ချင်တယ်။
ကြုံရင်လဲ ကြောက်မိမလား တွေးရင်း မကြုံချင်တော့ပါဘူး။
အိမ်မက် တွေထဲ လိုမှာ ကြုံ ရင်တော့ အတင်း ကို အမျှဝေ မိတာဘဲ။
စာလေးတွေ များများ ရေးပါဦး မအိ ရဲ့။
.ခုတစ်ပုဒ်က နံပါတ်တစ်ပါ မလတ်ရယ်…
အဲလို ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ရေးကြည့်ချင်တယ်
ကိုယ်တွေ့ ဆို ပို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနိုင်ပေမယ့်
ကြားဖူးနားဝတွေ ပဲ ချရေးရတော့မယ်
၁၀နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့ ကွယ်လွန်သူနိုဗွီရဲ့ မမကြီးကို သတိ၇သွားတယ်
နိုဗွီရဲ့ မမကြီးလဲ ကောင်းမွန်ရာဘုံဘ၀ရောက်ပါစေလို့
ကျမလည်း သိပ်မကြာခင်က ဆုံးသွားတဲ့ ဦးကြီးကို အိမ်မက်ထဲများတွေ့မလားလို့ ခဏခဏ အိမ်မက်မျှော်ဖူးတယ်
တခါတလေ ကိုယ်က မမေ့ချင်တာတောင် သူတို့ကတော့ ထားသွားရက်တယ်
ကျမက အလောင်းတောင် မမြင်လိုက်ရလို့ ဖြေလို့ မပြေဘူး
လက်ပံပွင့်ချိန်ဆိုတော့လဲ ဒီလိုပဲ ပေါ့နော်…